Ampidino Image Tuner 6.2 ho an'ny Windows
Ampidino Image Tuner
Sehatra: Windows Version: 6.2 Fiteny: English
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (2.88 MB)
Ampidino Image Tuner, Image Tuner dia programa fanovana sary maimaimpoana sy mahomby izay ahafahanao manao fanovana sary isanandro. Mpampiasa maro no tsy mila ny fiasa miasa aminny programa toa ny Photoshop hanaovana asa fanodikodinana sary tsotra sy tsotra. Satria, aminny ankapobeny, ny fiasa isanandro ataontsika aminny rakitra sary; Manova ny endriny, manova ny endrika, manova anarana anarana sy ny sisa.
Na dia maro aza ny programa eo aminny tsena afaka mahavita ireo fiasa ireo dia mety manana olana aminny fampiasana azy ireo ianao noho ny interface sarotra, dia tsy tianao ny mividy azy ireo satria karamaina izy ireo, na tsy te hampidina azy ireo ianao noho ny habeny. Image Tuner, izay afaka ampiasaina maimaimpoana aminireto fepetra ireto, mora ampiasaina noho ny habeny kely sy ny interface-friendly user, dia ho anao.Fomba fiasa:
Manova habe, manova anarana, mihodina, manampy sonia, fanovana endrika
Fandrefesana manokana ho anny iPod, iPhone, Facebook, Twitter, DVD
Manohana ny endrika JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF, PCX sy endrika maro hafa.
Manohana ny endrika fakan-tsary toy ny RAW (CRW, CR2, RAW, NEF, DCR, X3F, ORF sy maro hafa)
Safidy sy fikirana mandroso ho anny mpampiasa mandroso
Fanapahan-kevitra mandroso sy fanamafisana
Image Tuner Specs
Haben'ny rakitra: 2.88 MB